rayhab ကဘာလဲ - Metrobus Metrobus ဘဝတွေကိုယူ ... Metrobus, ဤကဲ့သို့သော Metrobus, Metrobus အမျှ ... လမ်းပေါ် နေ.
HomeလောကMetrobus Metrobus ဘဝတွေကိုယူ ... လမ်းပေါ် နေ. ... Metrobus, Metrobus အမျှလိုပဲဒီ Metrobus ဘာလဲ
30 / 07 / 2012 Levent Ozen လောက, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
တက် Metrobus, Metrobus ချ ...
Metrobus လမ်းမပေါ်တွင်တည်းခို ...
Metrobus ဘဝတွေကိုယူ ...
Metrobus, ထိုကဲ့သို့သော Metrobus အဖြစ် ...
က Metrobus ဖို့အမှားအကြိုးခံစားခှငျ့မပေးပေမဲ့,
အဘိဓာန်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းပုံပြင်များ၏ Limoni မျိုး,
နီးပါး uneventful နေ့ကအတိုင်းထက်အလွန်,
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကစက္ကူရဲ့သောကြာနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ 17 ပြင်ဆင်နေကြသည်။ ထုတ်လွှင့်စတင်လာနံနက်ခင်းပါတူရကီသုံးလဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါအရေးယူမှုနှင့် Melih'l cuff နှင့်အတူဆန့်ကျင်ပါလိမ့်မယ်။
မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Melih ရဲ့, 225 50 စုစုပေါင်းခရီးသည်စွမ်းရည်သတင်းကိုလက်ခံရရှိရန်နယ်သာလန်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့တွင်စူပါဇိမ်ခံကားဘတ်စ်ကားထဲမှာထည့်သွင်းခဲ့သည်။
သူကယာဉ် catalog ကိုစေလွှတ်။ ,
အဆိုပါ APTS ၏မူလအမည် ...
အလုပ်လုပ်မယ့်အကြားမော်တော်ကား-Nation Esenboga ။
MAG, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်တော်လှန်ရေးကပြောပါတယ် ...
ကျွန်မချက်ချင်း Metro ဘတ်စ်ကားနှင့်အတူပေါင်းစည်း ...
"Metrobus" ဟူသောစကားလုံးသညျထှကျ ...
ငါ Meliha နွေရာသီကပြောသည်။
ကျွန်မလာမယ့်လေဘတ်စ်ကားများတွင် MAG ၏လက်မှဓာတ်ပုံမှထားလိုက်တယ်။
"ဒီဘတ်စ်ကားအများကြီးအကြောင်းကိုစကားပြောနေကြသည်" ဟုသူကရေးသားခဲ့သည် ...
font လည်းအချည်းနှီးသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြစ်နေဆဲအတွက်အဆုံးသတ်ကြဘူး ...
သူတို့ဒီတော့အပေါ်ယံလျှင်တစ်ခုချင်းစီကိုခေါင်းစဉ်, ဆက်ဆံနေသည် ...
ကို 'အဘ၏နာမတျော၏ဘာသာစကားမှာသန်းလျှော့ချရေးငါ Metrobus ဖြစ်၏။
ကြောင့်နှင်းဖို့လမ်းမကြီးပေါ်တွင်သောင်တင် Left Holidaymakers 27 / 01 / 2014 နှင်း holidaymakers ကြောင့်ရန်လမ်းမပေါ်တွင်သောင်တင်ခဲ့ကြ: အစာသင်ချိုးရဲ့ start ပြီးနောက်ရောက်ရှိလာ Kartalkaya holidaymakers ကျနော်တို့ကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာနှင်းနှင့် icing ရန်လမ်းမပေါ်တွင်ဖမ်းနေ၏။ ကြောင့် Kartalkaya ဆီးနှင်းအတိမ်အနက်ကိုကတည်းကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်နှင်းဖို့မနေ့ကညနပေိုငျး 65 စင်တီမီတာအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ အချို့ပြန်လာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်စဉ်အခါ, icing ယာဉ်များထားရန် holidaymakers, မိုးနှင့်ဆီးနှင်းသံကြိုးသောင်တင်။ အဆိုပါနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းအတွင်းရှိဟိုတယ်ထေို 95 ရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဘား, AA ကိုသတင်းထောက်တွေကိုကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်အီဘရာဟင်တူရကီ Kartalkaya ထံမှအားလပ်ရက်, ယာဉ်ပေါ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတာယာဖြစ်သော်လည်းကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာနှင်းမှလျှင်ကွင်းဆက်ကပြောသည်။ သူကြိုက်နှစ်သက်သည်သောမြို့တော် Kartalkaya ရန်၎င်း၏နီးကပ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ...
Uludag နှင်းကျမှုကြောင့်ပစ္စည်းကတ္တရာစေးလမ်းမကြီးကြာသောကေဘယ်လ်ကားများ၏ဆောက်လုပ်ရေး (ဓာတ်ပုံပြခန်း) အတွက်တည်းခို 22 / 11 / 2014 ကြောင့်နှင်းကျဖို့လမ်းကိုဆင်းတည်းခို en Uludag cable ကိုကားတစ်စီး၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပစ္စည်းကိုဦးဆောင်: မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူယာဉ်မောင်းများ၏စင်တာများ Uludag ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်သိသာထင်ရှားသောနှင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလခရီးသွားလုပ်ငန်းသောင်တင်ခဲ့ကြသည်။ TR cable ကိုကားဦးဆောင်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများထိန်းချုပ်ရေးထဲကအသွားအလာလမ်းကြောင်းမှပိတ်ပစ်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ Uludag အတွက်နှစ်ရက်ထိရောက်သောဖြစ်သည့်နှင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးတစ်ခု hard drive ကိုနထေိုငျခဲ့သညျ။ အမျိုးသားပန်းခြံထို့ကြောင့်5မီတာသည်အထိလဲယူဆလိုက်ပြီးနောက်အဖြူရောင်ပတ်ရစ်လမ်းပေါ်မြင်သာ Fog ။ ကွင်းဆက်takmayıp drivers တွေကိုထိပ်သီးအစည်းအဝေးခက်ခဲအချိန်လေးကိုသွားလိုသောအခါ။ အခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့လမ်းအပေါ်ယူပြီးသူယာဉ်မောင်းများ၏ကွင်းဆက်ထဲမှာနှင်းဖုံးလမ်းမပေါ်တွင်လမ်းလျှောက် ...
အခြားသားကောင် Metrobus 21 / 09 / 2012 Sefaköy-Çobançeşmeအဆိုပါ Metrobus လမ်းကြောင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး, metrobus စျေးမှာ၏ရလဒ်အဖြစ်ကွယ်လွန်သွားBeylikdüzü-CevizliTN 34 1829 နှောင်ကြိုးလင်ပန်းအချိန်မစ္စတာအီး Metrobus ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, Metrobus ရုတ်တရက်လမ်းဖြတ်ကူးရန်လမ်းဝင်တစ်ဦးလူကူးထိမှန်ကြောင်း။ 50 မီတာလူကူးအကြောင်းကိုယာဉ်အောက်မှာဆွဲငင်အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Metrobus ဒရိုင်ဘာ, အ emitting ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာကမီးသတ်သမားများကညပ်သည်အဘယ်မှာရှိနေဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်ထွက်ထွက်ခွာကြေညာချက်လျှောက်ထားရန်ရဲစခန်းမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထို့နောက်စာမေးပွဲများ၏ဥပဒေရေးရာဆေးပညာအင်စတီကျုမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
Metrobus ပျံသန်းမှုနိုင်ငံသားများလမ်းဆင်းတည်းခိုဖျက်သိမ်းခဲ့သည် 04 / 05 / 2015 Metrobus ခရီးစဉ်လမ်းအပေါ်နိုင်ငံသားများဖျက်သိမ်းခဲ့: xnumx'inc Metrobus ကြောင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်စက်ဘီးခရီးစဉ် edilince နိုင်ငံသားများလမ်းဆင်း နေ. လေယာဉ်ခရီးစဉ်များဖျက်သိမ်း။ Metrobüs'lနိုင်ငံသားများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခွအေနကေိုပုနျကနျမပေး။ အဆိုပါစက်ဘီးစီးခရီးစဉ်၏ xnumx'inc စင်မြင့်တချို့ကလမ်းများယာဉ်ကြောမှအပိတ်ခံခဲ့ရအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ Zincirlikuyu- Sogutlucesme Metrobus ပျံသန်းမှုအနေဖြင့်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ Anatolian ခြမ်းဟာရပ်တန့် Zincirlikuyu Besiktas '' မှာပိတ်ထားရတဲ့ကူးလိုသော Metrobus ခရီးသည်လမ်းလျှောက်ဖို့ခဲ့သည်။ Metrobus turnstiles ဖျက်သိမ်းခြင်းolmasıylazincirlikuရပ်နားသည့်အချိန်တွင်ပိတ်ထားခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများဘူတာမှာတာရှည်စီတန်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများအခွအေန၏ Anatolian ခြမ်းထက်မကျော်လွန်ပုန်ကန်လေပြီ။ တစ်ဦးကနိုင်ငံသားပါ "ဟု Eminonu ကိုဖြတ်ပြီးသွားမယ့်။ ငါကဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်ကိုကြား။ ငါ Metrobus နှင့်အတူယခုဖြစ်ကြောင်းကိုခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့သော ...
တစ်ဦးစရိုက်ကေဘယ်လ်ကား Wagon သေ Rized 22 / 05 / 2013 တစ်ဦးစရိုက်ကေဘယ်လ်ကား cable ကိုကားများ Rized လှည်း Wagon Tetovo လူမျိုး၏မြို့မှာရှိတဲ့ဦးခေါင်းကိုလျှော့ချနိုင်ကျသွားအနိစ္စရောက်လေ၏။ စိုစွတ်လက်ဖက်ရည်ဥယျာဉ်၌စရိုက်ကေဘယ်လ်ကားတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားနေချိန်တွင်မြို့Soğuksu Long က (50) ၏ Shaukat လီရပ်ကွက်အတွင်းသည်လှည်းကိုကျော်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုရိုက်ယူခြင်းခေါင်းပေါ်မှာကျဆင်းခဲ့သည်။ Sahin, အခင်းဖြစ်ပွားရာမှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Sahin ရဲ့အသုဘ, အခင်းဖြစ်ပွားရာများ၏စာမေးပွဲအပြီးတစ်ခုသူသခှေဲစိတျခွငျး Trabzon များအတွက်, ဥပဒေရေးရာဆေးပညာအင်စတီကျုမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
တစ်ဦး 29 ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့ Kadikoy-Kartal မိနစ်ကနေ Anatolian ဘက်မှာပထမမြေအောက်ရထား,
Uludag နှင်းကျမှုကြောင့်ပစ္စည်းကတ္တရာစေးလမ်းမကြီးကြာသောကေဘယ်လ်ကားများ၏ဆောက်လုပ်ရေး (ဓာတ်ပုံပြခန်း) အတွက်တည်းခို
Artvin Can စရိုက် cable ကိုကားထဲတွင်ဂုဏ်ပြု